IVodafone ikhombisa ukuthi inethiwekhi yayo ye-4G eSpain ingasetshenziswa ukulawula ukuhamba kwezindiza kwama-drones | Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala
Vodafone isanda kukhombisa ngesikhathi seMobile World Congress ukuthi namuhla bayatholakala futhi banobuchwepheshe obudingekayo ukuqala ukusebenzisa okusha kwabo Inethiwekhi ye-5G eSpain. Ngaphandle kwale nto intsha, sebeqalile nokuphakamisa udaba olungakhathaza abaholi abaningi, njengo isilawuli somoya abasebenzisa ama-drones, into abathembisa ukuthi bangayenza besebenzisa inethiwekhi yabo ye-4G.
Njengoba bekulindelekile, lesi siphakamiso samukelwe kahle kakhulu yizikhungo ezithile, kangangoba iVodafone isiqalile ukusebenza ngokubambisana ne-ejensi ethile I-European Aviation Safety Agency ekufezeni uchungechunge lwezivivinyo ezizokwenzeka eJalimane naseSpain. Njengemininingwane, ngikutshele lokho ukuze ufike kuleli phuzu, IVodafone bekufanele ikhombise ukusebenza kohlelo lwayo kokunye ukuhlolwa kokuqala okwenziwe ngempumelelo eSeville ngonyaka odlule.
IVodafone ifakazela ukuthi inethiwekhi yayo ye-4G ingasetshenziswa eSpain ukulawula ukusetshenziswa kwe-airspace ngama-drones ezentengiselwano
Ngesikhathi sokuhlolwa kokuqala, iVodafone ikhombisile ukuthi inethiwekhi yayo ye-4G inamandla anele oku lawula i-drone enesisindo sama-2 kilos. Inhloso yangempela yokusebenzisa le nethiwekhi ukugcina ithrekhi yawo wonke amadivayisi nobuchwepheshe bezokuphepha obutholakalayo bokusetshenziswa kwezebhizinisi kusukela ngo-2019.
Kuleli qophelo, iphuzu eliyisisekelo kufanele licatshangwe futhi lelo yipulatifomu aklanyelwe ukulandelela nokulawula ama-drones angasese, kodwa lezo ezisetshenziselwa ukuhweba nokuthi, ngaphezu kwalokho, zinosayizi omkhulu. Enye imininingwane ebalulekile ukuthi inethiwekhi yakhelwe ukulandelela ama-drones aze afike ebangeni elingamamitha angama-400, ubude lapho ingaphoqa khona ukuthi idivayisi yehle ngoba ingaphazamisa indlela yendiza yezentengiselwano.
Indlela ephelele ye-athikili: Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala » drones » IVodafone ikhombisa ukuthi inethiwekhi yayo ye-4G eSpain ingasetshenziselwa ukwenza ukulawulwa kwethrafikhi yomoya kuma-drones
Ngiyabonga ngama-athikili enu, kuma-3D kuprintwa ukuma okunikezayo kuhle kakhulu. Ngisebenzisa i-Lion 2 futhi isebenza kahle kakhulu, futhi, yiSpanish ngakho-ke usizo lapha luyamangalisa
I-Keratin, into efanelekayo yamaprotheni angasetshenziswa kumaphrinta e-3D